राहत कोषमा कुमारी बैंकले दियो ५० हजार : लोकप्रियताको लागि जथाभावी राहत वितरण गरिँदैन –अध्यक्ष
छिटो खबर २०७६ चैत्र २३ गते आइतबार १९:२१:३२ मा प्रकाशित
चैत्र २३, सल्यान ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषको लागि कुमारी बैंक लिमिटेडले पचास हजार उपलव्ध गराएको छ । आइतबार कुमारी बैंकका शाखा प्रबन्धक मिथुन बुढाथोकीले गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष के.सीलाई पचास हजारको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन । कोभिड १९ महामारीको कारण देश लकडाउन भइरहेको घर बाहिर ज्याला मजदुरी नगरी छाक टार्न समेत गाह्रो हुने विपन्न परिवारहरुलाई खाद्यान्न लगायतका राहत सामाग्री उपलव्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले कोषको स्थापना गरेको छ । त्यस्ता विपन्न परिवारहरुको तथ्यांक संकलन गर्नको लागि सबै वडाहरुमा पत्राचार गरिएको छ र तथ्यांक अनुसार राहत वितरण गरिने बताईएको छ ।
तर पीडितहरुको नाममा हुने खाने वा खान पुग्नेले समेत राहत माग गरिरहेको कारण राहत वितरण गर्न कठिनाई परेको भन्दै अध्यक्ष के.सीले तिक्तता प्रकट गरे । उनले भने “यो अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो नपर्ने को होला र ? तर खान पुग्नेले पनि राहतको आशा गरेमा छाक टार्नै गाह्रो हुने हरु प्रति अन्याय हुनेछ । त्यसैले कृपया जसको घरमा चुलो बल्दैन उसको हकको राहत लिएर अन्याय नगरौं ।”
खाद्यान्नको अभावमा कोही पनि भोकै बस्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिज्ञा गर्दै उनले स्थानीय बजारहरुमा खाद्य सामाग्रीको अभाव छ वा यातायात वा अन्य कुनै कारणले खरिद गर्न नपाएको भए गाउँपालिका अध्यक्ष लाई सिधै सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले थपे “खाद्यान्न बजारबाट लिन कठिनाई छ भने हामी टोल टोल, घरघरमा गाडी घुमाउन तयार छौं ।”
देशका सबै तहहरुमा राहत सामाग्रीहरु वितरण भईरहेको वर्तमान अवस्थामा लोकप्रियताको लागि मात्रै वा कुनै दल विशेषका कार्यकर्ता खुशी बनाउनको लागि वा राहतको लागि राहत वितरण नगरिने उनले बताएका छन् । छिटो खबरसँग कुरा गर्दै उनले कुनै राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह वेगर, लक्षित परिवारलाई राहत वितरण गरिने र राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको कुनै पनि दुरुपयोग नहुने प्रतिवद्धता गरेका छन् । यो विपद्को समयमा सहयोग गर्ने महान व्यक्तिहरुलाई एकमुष्ट सम्मानपत्र प्रदान गरी सम्मान गरिने अध्यक्ष के.सी.ले बताएका छन् ।
यदि कुनै हुने खानेले राहत पाएमा वा कसैको चुलो नबलेमा प्रत्यक्ष आफुलाई सम्पर्क गरी सूचना दिनको लागि पनि उनले आग्रह गरेका छन् । साथै यो समयमा राहत सहयोग एकद्धार प्रणालीबाट गरिने र कुनै पनि व्यक्ति, संघ संस्थाहरुले सहयोग गर्न चाहेमा त्यस्तो सामाग्री वा सहयोग गाउँपालिकामा उपलव्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । संकटको यस अवधीमा आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा विविध कोष खाता ग.५.१. ०७२०१०४०२५०१४६ खोलिएको अध्यक्ष के.सी.ले बताएका छन् ।